मान्छे सिम्पल गालामा डिम्पल, चर्चित गायक तथा भ्वाइसका कोच राजु लामा, हेरौ २० तस्बिर…. – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/मान्छे सिम्पल गालामा डिम्पल, चर्चित गायक तथा भ्वाइसका कोच राजु लामा, हेरौ २० तस्बिर….
मान्छे सिम्पल गालामा डिम्पल, चर्चित गायक तथा भ्वाइसका कोच राजु लामा, हेरौ २० तस्बिर….
गायक राजु लामा ४३ वर्षका भए । उनी सांगीतिक समूह मंगोलियन हार्टका भोकलिस्ट हुन् । उनको बादलपारिको देशबाट, हल्ला चलेछ , पर्खाइमा, तिमीलाई देखेर, गाजलु टीका, उँभो–उँभो खासालगायत दर्जनौँ गीत लोकप्रिय छन् । उनले नेपाली, तिब्बती र तामाङ भाषामा समेत गीत गाइसकेका छन् । उनले २५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि गायनमा सक्रिय छन् ।
उनी त्यो जमानाका गायक हुन्, जुन समय अडियो क्यासेटको जमाना थियो । जुन समय सांगीतिक व्यान्डको जमाना थियो । एक जमाना यस्तो पनी आयो, जुन समयमा मंगोलियन हार्ट र राजु लामा दुबै निकै चर्चित थिए
उनकी दिदीको विवाह काठमाडौंको बौद्धमा भयो । बुवाले राजुलाई दिदीसँगै राखेर पढाउने चाहना राखे । काठमाडौं जाने कुराले राजु फुरुंग भए । रंगीचंगी शहर, मोटर गाडी देख्ने उत्सुकताले उनलाई कताकता काउकुती लगाउँछ । उनी यसै मख्ख पर्छन् । अन्ततः बुवाको काँधमा चढेर उनी घर छाड्छन् । आमा छाड्छन् ।
त्यसबखत काठमाडौं जाने भनेपछि गाउँ–छिमेकका मान्छेहरू हूल बाँधेर हिंड्नुपर्ने । एक्लै–दुक्लै नहिंड्ने । गाउँभरका १०–१५ जना काठमाडौंतर्फ लाग्छन् । बुवाको काँधमा चढेर राजु पनि सो टोलीमा सम्मिलित भए । त्यो सानो लस्कर लेकको साँघुरो बाटो, उकाली, ओराली, खोल्सा हुँदै, ठाउँ–ठाउँमा थकाइ मार्दै, खाजा–पानी खाँदै अगाडि बढ्छ ।
अनि देखापर्छ समतल शहर । खचाखच घरहरू, मान्छे नै मान्छे, यत्रतत्र गाडीहरू । हो–हल्ला, भीडभाड । ‘पहिलो पटक काठमाडौं देख्दाको धमिलो स्मृति बाँकी छ,’ राजु सम्झन्छन्, ‘त्यो पुरानो बसपार्क, अनि बौद्ध । त्यो बेला सबै कुरा मेरो लागि अनौठो थियो ।
त्यो जमानामा शहर, चोक, गल्लीका पानपसल जस्तै भरिभराउ बजार हुन्थ्यो, अडियो क्यासेटको । ‘ए’ र ‘बी’ साइडमा औसत चारको दरले आठ वटा गीत त्यसभित्र कैद हुन्थे । एक प्रतिको मूल्य ४० देखि ८० रुपैयाँसम्म । ‘हिट’ गीतको क्यासेटलाई ८० पर्‍थ्यो । ठीकठीकैको क्यासेट ४० मै पाइन्थ्यो ।
बिस्तारै बिस्तारै मंगोलियन हार्टले सबैको माया पाउदै जान्छ । बादलपारिको देशबाट, हल्ला चलेछ , पर्खाइमा, तिमीलाई देखेर, गाजलु टीका, उँभो–उँभो खासालगायत दर्जनौँ गीत लोकप्रिय हुन्छन् । अनि गीतसङै राजु लामा पनि लोकप्रिय बने । तर क्यासेटको जमाना सिडि पेनड्राईभ हुँदै फेरिए संगै राजु लामाले पनि बदलिन्छन र अमेरिका पलायन हुन्छन् । के समय त उनी गुमनाम नै रहे ।